Uppercut Deluxe - Matte Pomade | The Myanmar Gentlemen Supplies
Home › Uppercut Deluxe - Matte Pomade
--Medium to High Hold | Dry Matte Finish | Water-Based Pomade--
ဆံပင်ကို Matte Finish နှင့် လုံးဝတောက်ပြောင်စေခြင်းမရှိပဲ ထိန်းအားကောင်းကောင်း Medium to High Hold နှင့် ဆံပင်အုံထူစေမည့် တိတိကျကျခြောက်သွေ့သောပုံသွင်းမှုကိုလိုချင်သူများအတွက်...
Uppercut Deluxe - Matte Pomade သည် ကမ္ဘာကျော်အရည်အသွေးမြင့် Premium ခေါင်းလိမ်းဆီအမှတ်တံဆိပ် Uppercut Deluxe - Australia နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်ထားသော Medium to High Hold အထိထိန်းအားပါရှိပြီး၊ ဆံပင်ကိုလုံးဝအရောင်တောက်စေခြင်းမရှိတဲ့ ခြောက်သွေ့သော Matte Finish (Zero Shine) ကိုပေးစွမ်းပါတယ်။
အားစိုက်ထုပ်မထားသလို ဆံပင်ပုံစံများနှင့် အဖွပုံစံများသွားနိုင်ပြီး၊ တိတိကျကျလက်နဲ့ပုံသွင်းနိုင်စေမဲ့ Water Based Dry Paste အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ Texture နှင့် Volume ကောင်းကောင်းပေးနိုင်သည့်အတွက် ဆံပင်ပါးသူများအတွက်လဲသင့်တော်ပါသည်။ ဆံပင်ကိုမာတောင့်သွားစေခြင်းမရှိပဲ လွယ်လွယ်ကူကူဆံပင်ပုံစံပြန်ပြင်နိုင်စေပြီး၊ ရာသီဥတုဒဏ်ကိုလဲခံနိုင်မည့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူကြိုက်များအသုံးပြုနေကြသော ခေါင်းလိမ်းဆီဖြစ်ပါသည်။
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး Medium to High Hold ထိန်းအား
ဆံပင်ကိုလုံးဝအရောင်တောက်စေခြင်းမရှိတဲ့ Matte Finish
ဆံပင်အုံထူစေပြီး တိတိကျကျဆံပင်ပုံသွင်းနိုင်စေမဲ့ Dry Application
Crème Brulee နဲ့ Hazelnut ရနံ့
3.5oz/100g ဘူး size
Uppercut Deluxe - Matte Pomade has been specially formulated to giveamedium hold andanatural, matte finish. Long hair or short hair – Matte Pomade will keep you looking your best all day long. Despite the creamy appearance, Matte Pomade gives ample grip and hold once applied to your hair to assist in achievingagreat look. It grips in the hair, not in your hands giving you ultimate styling power. This product is also water soluble so it can be washed out with ease. A must have for your styling range.
For Casual & Laid-back hairstyles
Crème Brulee & Hazelnut Scent